सल्यानमा जीप दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते - Ganatantra Online
सल्यान, कार्तिक १०। सल्यानमा जीप दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सल्यान कुमाख गाउँपालिकाको मर्मपरिकाडाबाट नेपालगन्ज जाँदै गरेको भे. १ ज.९३० नं.को महेन्द्रा बलेरो जीप कुमाख गाउँपालिका २ मा दुर्घटनामा परेको हो ।
दुर्घटनामा परी कुमाख गाउँपालिका २ बस्ने बर्ष ३६ का बुध्दि थापा, २१ की दुर्गा खत्री, र ३२ की लोकमाया पुन गम्भीर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रवक्ता तथा प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य नौ जना घाइतेको अवस्था भने सामान्य रहेको छ।
अन्य घाइते हुनेहरुमा जीप चालक सल्यानको बनगार कुपिण्डे नगरपालिका ४ बस्ने बर्ष २४ का लाल बहादुर बुढा, जीप मालिक कुमाख गाउँपालिका २ बस्ने बर्ष ३३ का पुर्ण बहादुर बुढा सोही गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने बर्ष २९ का बिशाल विक रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
त्यस्तै कुमाख १ बस्ने बर्ष ३० का ईन्द्र बहादुर चन्द, कुपिण्डे नगरपालिका ४ बस्ने बर्ष २९ का पिपर बुढा, सिद्ध कुमाख गाउँपालिका ४ बस्ने बर्ष २१ का दिल बहादुर चालउने, उनकै श्रीमाती बर्ष २० की दुर्गा चलाउने, छोरी बर्ष २ की प्रशान्त चलाउने घाइते भएका छन् ।
त्यसैगरी कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका ३ बस्ने बर्ष २८ का देब बहादुर बस्नेत पनि घाइते भएका छन् । घाइतेहरु सबैको उपचारका लागि सल्लीबजार पठाइएको र चालकलाई भने नियन्त्रणमा लिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जीप आज विहान सवा नौ बजे दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा परेको जीप सडकबाट करिब ५० मिटर तल खसेको छ । दुर्घटनाको कारण भने खुलेको छैन ।